Tsy mila an'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01 > Tsy mila an’Andriamanitra
Teo amin’ny Areopago ny apostoly Paoly dia nanolotra ny sampin’ny Atenianina tamin’ilay Andriamanitra marina: “Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, dia Izy, Tompon’ny lanitra sy ny tany, dia tsy mitoetra ao amin’ny tempoly nataon-tanana. Ary tsy avelany hotompoin’ny tànan’olona tahaka ny mila zavatra, fa Izy no manome ny olona rehetra ny aina sy ny fofonaina ary ny zavatra rehetra” (Asan’ny Apostoly 1.7,24-25).
Nasehon’i Paoly ny fahasamihafana misy eo amin’ny sampy sy ny tena Andriamanitra telo izay iray. Tsy mila ny tena Andriamanitra fa Andriamanitra manome fiainana, mizara izay soa rehetra ananany izy satria Andriamanitra dia fitiavana. Ny sampy kosa dia mila tanan’olombelona, ​​izay noforoniny mba hanompoana azy.
Ahoana anefa raha olona tokana Andriamanitra, araka ny fampianaran’ny Unitarianisma, izay mandà ny fampianarana ny amin’ny Trinite sy ny maha-Andriamanitra an’i Jesosy avy any Nazareta? Ahoana no niainan’Andriamanitra talohan’ny famoronana ary inona no ho nataony talohan’ny nanombohan’ny fotoana?
Tsy azo antsoina hoe be fitiavana mandrakizay io Andriamanitra io satria tsy nisy zavamananaina afa-tsy Izy. Andriamanitra toy izany dia mila ary mila zavaboary mba ho afaka ny ho tia. Ny Andriamanitra telo izay iray kosa dia miavaka. Nasehon’i Jesosy izay nataon’ilay Andriamanitra marina talohan’ny famoronana: “Raiko ô, tiako ho ao amiko koa izay nomenao Ahy, mba hahitany ny voninahitro izay nomenao Ahy, izay efa nomenao Ahy; fa efa tia Ahy ianareo, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao » (Jaona 17,24).
Ny fifandraisana misy eo amin’Andriamanitra Ray sy ny Zanany dia mifampitohy ary mandrakizay; ny Zanaka dia tia ny Ray: “Fa aoka ho fantatry izao tontolo izao fa tiako ny Ray ary manao araka izay nandidian’ny Ray Ahy” (Jaona 1.4,31).
Ny Fanahy Masina dia fitiavana: “Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena”2. Timoty 1,7).
Misy fiombonam-pitiavana mandrakizay eo amin’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy, ka izany no nahafahan’i Jaona nanoratra fa Andriamanitra dia fitiavana: «Ry malala, aoka hifankatia isika; fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay tia no naterak'Andriamanitra ka mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra; satria Andriamanitra dia fitiavana »(1. Johannes 4,7-8).
Ilay Andriamanitra telo izay manana ny fitiavana dia mitondra ny fiainana ao amin’ny tenany: “Fa tahaka ny Ray manana fiainana ho Azy, dia tahaka izany koa no nomeny ny Zanaka hanana fiainana ho Azy” (Jaona. 5,26).
Hafa tanteraka amin’ny andriamanitra hafa rehetra Andriamanitra. Lavorary ny tenany. Ilay Andriamanitra mandrakizay, izay mitondra ny fiainana ao anatiny ka tsy mila na inona na inona, dia nanome aina ny zavaboariny sy ny olombelona rehetra ary nanokatra ny lalana mankany amin’ny fiainana mandrakizay amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Izay tsy manana filana dia namorona izao rehetra izao tamin'ny alalan'ny asa feno fahasoavana sy fitiavana. Mety hisy hanatsoaka hevitra fa tsy miraharaha antsika Andriamanitra satria tsy mila antsika Andriamanitra. Andriamanitra dia tia antsika ary nahary antsika araka ny endriny mba hananantsika firaisana aminy sy hananantsika fifandraisana akaiky aminy. Irin’Andriamanitra ny hanompoantsika azy, tsy ny hanome fahafaham-po izay ilainy aminy, fa mba hahasoa antsika, mba hahafahantsika manaiky azy sy mifandray aminy ary miaina ao anatin’izany fifandraisana izany.
Afaka misaotra an’Andriamanitra Ray ianao fa tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanany no nomeny anao izao tontolo izao sy ny fiainany ary ny fanasana ho amin’ny fiainana mandrakizay.